Mkpa nke A Video Marketing Strategy: Statistics na Tips | Martech Zone
Mkpa nke A Video Marketing Strategy: Statistics and Tips
Fraịdee, Nọvemba 13, 2020 Fraịdee, Nọvemba 13, 2020 Douglas Karr
Anyị na-ekekọrịta otu infographic na mkpa nke ahịa ahịa - na nke ahụ, n'ezie, gụnyere vidiyo. Anyị na-eme ọtụtụ vidiyo maka ndị ahịa anyị n'oge na-adịbeghị anya ma ọ na-abawanye ma njikọ aka ma ọnụego ntụgharị. E nwere ọtụtụ ụdị edekọ, mepụtara vidiyo ị nwere ike ime… echefukwala ezigbo oge vidiyo na Facebook, vidiyo mmekọrịta na Instagram na Snapchat, na ajụjụ ọnụ Skype. Ndị mmadụ na-ewe ọtụtụ vidiyo.
Ihe Mere I Ji Chọrọ Ahịa Azụmahịa vidiyo
Youtube gara n'ihu ịbụ # 2 websaịtị kacha chọọ ma e wezụga Google. Ndị ahịa gị na-achọ ikpo okwu ahụ maka ihe ngwọta… ajụjụ bụ ma ị nọ ebe ahụ ma ọ bụ na ị nọghị.
Vidio nwere ike inyere aka mfe usoro ma ọ bụ okwu dị mgbagwoju anya nke ga-achọ ọtụtụ ederede na onyonyo iji ghọta nghọta. Vidio na-akọwa ihe na-aga n'ihu na-eme mgbanwe maka ụlọ ọrụ.
Vidiyo na-enye ohere maka nwekwuo ucheỊhụ na ịnụ ihe na-akwalite ozi na otu onye na-ekiri gị si ele ya anya.
Vidio na-ebugharị ọnụ ọgụgụ dị elu pịa-site na mgbasa ozi, nsonaazụ njin ọchụchọ, na mmelite mgbasa ozi mmekọrịta.
Ndị nọ n’echiche idu ndú na akaebe ndị ahịa na-enye ọtụtụ ihe akpachi anya ahụmahụ ebe ọchị, mma, na ntụkwasị obi nwere ike ịgwa onye na-ekiri ya ihe ọchị.
Video nwere ike ịbụ karịa ụtọ na itinye aka karịa ederede.
Ndekọ Ọnụahịa Video
Nde mmadụ 75 na US na-ekiri vidio dị n'ịntanetị kwa ụbọchị
Ndị na-ekiri na-ejigide 95% nke ozi mgbe ọ dị na vidiyo ma e jiri ya tụnyere 10% mgbe ị na-agụ ya na ederede
Vidio mmekọrịta na - ewepụta 1200% karịa karịa ederede na onyonyo jikọtara
Vidiyo na ibe Facebook na-eme ka njedebe onye ọrụ njedebe site na 33%
Naanị ịkọwa okwu vidiyo na vidiyo email na-abawanye site na 13%
Vidio na - eme ka 157% mụbaa na trafịkị organic sitere na peeji Nsonaazụ Ngini Nchọgharị
Vidio agbakwunyere na weebụsaịtị nwere ike ịbawanye okporo ụzọ site na 55%
Ndị na-ere ahịa na-eji vidiyo na-eto eto 49% ngwa ngwa karịa ndị na-abụghị ndị ọrụ vidiyo
Vidio nwere ike ịbawanye ntụgharị ihu peeji site na 80% ma ọ bụ karịa
76% nke ndị ahịa azụmaahịa na-eme atụmatụ iji vidiyo iji nwekwuo mmata aha ha
Dị ka atụmatụ ọdịnaya ọ bụla ọzọ, jiri vidiyo na uru ya kachasị. Ndị na-ere ahịa ekwesighi inwe vidiyo narị ebe ahụ… ọbụlagodi naanị echiche ndu ndu nke ụlọ ọrụ, vidiyo na-akọwa ihe nke na-akọwa ihe siri ike, ma ọ bụ nyocha ndị ahịa nwere ike inwe mmetụta dị ịtụnanya na usoro ịzụ ahịa dijitalụ gị.
Otu ihe m wepụrụ na infographic a bụ na oge nlebara anya nke ndị mmadụ adịla obere karịa nke azụ azụ ọla edo. Nke ahụ abụghị ikpe. Naanị m na-atụgharị anya-na-ele otu oge ihe omume niile na ngwụsị izu… enweghi nsogbu na nlebara anya! Ihe merenụ bụ na ndị ahịa na-achọpụta na ha nwere vidiyo nhọrọ, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị ịdọta uche ha ma debe ya na vidiyo gị, ha ga-akwaga ebe ọzọ n'ime sekọnd.
Nke a bụ infographic, Mkpa ọrịre Ahịa vidiyo, site na IMPACT.
Tags: vidiyo vidiyoọdịda peeji videoVidio Ahịangwaahịa nkọwa vidiyoelekọta mmadụ media videoelekọta mmadụ videosyndacastụdị videoahịa vidiyovidiyoụdị vidiyovideo webinarndị dike website
Ezigbo: Njikwa Mmemme Na-akpaghị aka maka Ecommerce